09.10.2012 Yakatumirwa na: Art Sense
Pfungwa Pamba, Nzvimbo yemoto
Iyo nzvimbo yemoto ipapo inogadzira nzvimbo inotarisa mune imwe nzvimbo, inounza kunyaradza kwechokwadi, kudziya uye kunaka.
Zvisinei nekuti ichave nzvimbo yekungotsva moto, pakarepo inoshandura zvemukati uye ine pesvedzero huru pakutaridzika uye kungonzwa kwakazara kwenzvimbo. Haisi dambudziko rakaoma kuisa nzvimbo yemoto mune chero kamuri, kunyangwe pavheranda. Zvichienderana nekuti iwe unoishandisa senge yako yekutanga kupisa sosi kana kungoita basa rekushongedza, unogona kusanganisa mashandiro uye runako dhizaini mune rimwe. Heano mamwe mafungiro enzvimbo yemoto mumba mako uye villa. Nzvimbo yemoto pane veranda kana pachivanze, seyakaparadzana kunze kwekona.
kurongeka, kurongeka kwenzvimbo yemoto, veranda, imba yekutandarira, kunze kwekona, bindu, nzvimbo yekushongedza moto, kushongedza, nzvimbo yekushongedza moto, dhizaini yemoto, дома, pfungwa, mazano e villa, mazano ebindu, mazano eaya, mazano epamba, mazano emukati, mazano enzvimbo yemoto, mazano eimba, fenicha mazano, zvemukati dhizaini, nzvimbo yemoto, nzvimbo yemoto mubindu, nzvimbo yemoto mubhedha, nzvimbo yemoto mumba yekutandarira, nzvimbo yemoto mumba yekutandarira, nzvimbo yemoto pavheranda, nzvimbo yemoto muyadhi, nzvimbo yemoto nedombo, nzvimbo yemoto mukati, ibwe, nzvimbo yakanaka yemoto, imba, kupisa, moto wekupisa, nzvimbo yekushongedza moto, horo, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Pfungwa dzevharanda reimba yemazuvano, yemazuva ano. Shandura vharanda reimba kuti rive rakanaka ...
Zviitire chigaro chekushongedza chebhuronzi rakapiswa
Chii chingaitwe neyakaipisa kunze uye isina kukodzera mwenje bulb? Ehe, iwe unogona ...
Makumbo ehuku aine howa muhomwe yepacheke
Mabhatani zvimwe ndiwo anonyanya kuda huku yekudya kwemanheru kwemanheru emhuri. Zvauchange uri ...
Chikamu chechina - Chiedza uye kupinza Kuisa - Phalaenopsis inofanirwa kuiswazve ...
Kumba uye gadheni mazano. Anonakidza mazano ekushongedza imba uye dhizaini. (adsby ...
Bindu matairi akagadzirwa ekare emota matai
Tauya nemazano akasiyana ekushongedza tireya yemota, senge ...
Project yewakanaka-one-imba imba ine vatatu yekurara pa125sq.m.
Isu tinokupa iwe chirongwa chechakanakisa-chakavakirwa imba ine vatatu yekurara, matatu yekugezera, huru yekugara ...